Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseDashi UGeorginio Wijnaldum Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Gini". Indaba yethu ye-Georginio Wijnaldum yezingane kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yilapho. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi angakhulumi ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nomsebenzi kodwa abambalwa babheka i-Bio yethu yeGeorginio Wijnaldum ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
I-Georginio Wijnaldum Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UGeorginio Gregion u-Emile Wijnaldum wazalwa mhla ka-11th kaNovemba 1990. Wakhulela eRotterdam, eSouth Holland ngunina, uMaureen Wijnaldum nobaba, uRamon van La Parra.
Ngenkathi eneminyaka eyisithupha ubudala, abazali bakhe, bobabili abase-Afro-Suriname, bahamba ngesahlukaniso ngenxa yokuthi umama wathuthela e-Amsterdam. Kodwa-ke, uWijnaldum wanquma ukuhlala eRotterdam futhi wangena nogogo wakhe, lapho ehlala khona isikhathi esisele ebuntwaneni bakhe.
Eminyakeni encane kaWijnaldum, akazange abonise isithakazelo ebhola. Akazange adlale ngebhola noma ebuka ibhola ku-TV. Isifiso sakhe kwakuwukuthi abe umqeqeshi wezemidlalo noma i-acrobat. Lolu hlelo lushintsha lapho umshana kaWijnaldum emcela ukuba eze eSuku lokuvula naye uSparta Rotterdam. Akazange akholwe lokho akubona ..."Umdlalo omuhle webhola ku konke yayo Glory ". Wayengafuni ukuphila ngemuva kokubona umdlalo osemusha. Wijnaldum wamenywa esikoleni seSparta Rotterdam nentsha yakhe yebhola yaqala ukukhula kancane. Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba abe yilungu leqembu lakhe lesikhathi.
I-Georginio Wijnaldum Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
Ngemuva kokudlala i-Sparta Rotterdam ngezinkathi eziyisikhombisa u-Wijnaldum wanquma ukwamukela isipho esisha se-Feyenoord lapho eqedela umsebenzi wakhe webhola lebhola. Wayeqiniseka ukuthi ukudlala uFeyenoord kungcono ukuthuthukiswa kwakhe njengomdlali webhola futhi ukholelwa embonweni kaFayenoord.
E-Feyenoord, uWijnaldum wajoyina isizukulwane esiphumelelayo esithandwa nguLoyoy Fer noLuís Pedro. Waphuma njengethalenta eliyingqayizivele. Ngo-29 Juni 2011, umqondisi wezobuchwepheshe weFayenoord umemezele ukuthi iqembu lifinyelele ekuthengisweni kweWijnaldum libike ukuthi libiza imali engu-€ 5 million nge-PSV. Nakulokhu, wakhula amaqembu abo futhi wanikezwa ishidi le-10. UWijnaldum, owaziwa kakhulu ngesitayela sakhe sezinwele wayengumholi okhukhumezayo.
Ngo-11 July 2015, Wijnaldum wajoyina i-English Premier League club uNewcastle United ngenkontileka yeminyaka emihlanu, ngenani elibikiwe lokudlulisela imali engu-£ 14.5 million, okwenza kube yisignesha ebiza kakhulu kunobunikazi bukaMike Ashley. Intshisekelo yaseLiverpool yavela lapho ebhekwa njengomdlali womdlalo emdlalweni lapho ephoqa uMartin Škrtel ukuba abe nomgomo wakhe kanye nokuzifaka eqenjini le-2-0. Ngemuva kokubona ukuthi usuqedile inkathi njengomdlali wabo oyinhloko, abazange banqikaze bese bephonsa imali engu-£ 23 etafuleni likaNewcastle. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Georginio Wijnaldum Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ama-sweethearts esikoleni esiphakeme, asekhona. Vele ubheke uGeorginio Wijnaldum, owake waba kanye noVirginia Braaf omuhle kusukela eneminyaka eyishumi nambili. Ngaphandle kokungabaza, intombazane egcwele i-Rotterdam ayiyona into efana no-WAG. Bobabili abathandi basengakashadi njengesikhathi sokubhala.
Uma kukhona umuntu ongeke neze abe ngumgcini wegolide, nguNkk Braaf. Akalokothi aziqhayise ngempumelelo yomyeni wakhe odlala ibhola. Ngempela, bangaki abafazi bebhola abazokhetha inkonzo yeSonto ekuseni phezu kwemibhede yabo? UVirginia Braaf wenza ngokuqinisekile, njengoba ehlala eNkosini. Wathola ukuthula okholweni lwakhe emva komgwaqo omude usindiswe.
Virginia Braaf uhola impilo yakhe yokukhiqiza. Unomugqa wezinhlobonhlobo ezibizwa ngokuthi 'Shanyisa V'. Naye isebenza ohlelweni lokuzivocavoca olubizwa ngeThe BodSquad. Esikhathini esidlule, wayevame ukusebenzisana nezidakamizwa ezidakamizwa. Emakhasini akhe omphakathi wezenhlalo, awutholi tsunami we-duckfaces kodwa ikakhulukazi izithombe ezimnandi zomyeni wakhe, izingane zabo kanye namavidiyo wezinkonzo zesonto. UWijnaldum naphezu kwesimiso sakhe esimatasa njalo uthola isikhathi sezingane zakhe.
Umama kaWijnaldum waseVirginia wazala umfana ogama lakhe linguJacian ngo-Agasti 2017. Ukuzalwa kukaJacian kwafika ngemva nje kwamahora Wijnaldum wayesezile Jurgen Klopp's indawo enobungozi endaweni yabo eqenjini leqembu le-Champions League ne-4-2 ukunqoba kukaHoffenheim.
Umdlali waseDutch uWijnaldum uthumele izindaba kwi-akhawunti yakhe yezokuxhumana. Uthe: "Ngiyajabula ngempela ukuxoxa nawe izindaba ezimnandi ukuthi intombi yami enhle yazala indodana yethu uJacian Emile Wijnaldum ku-2: 22 namhlanje namuhla 24-08-17. Ngiziqhenya kakhulu intombi yami kanye nendodana yethu, bobabili banempilo futhi bajabule. "
I-Georginio Wijnaldum Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Imibiko yakamuva yembula amaqiniso ukuthi i-Wijnaldum inguMvelaphi weGanana. Usanda kususa igama lesiGhana "Boateng" njengoba isibongo sakhe isikhathi eside esidlule. Wayehamba negama lomndeni uGeorginio Boateng hhayi uGeorginio Wijnaldum. Elandela isahlukaniso sikamama wakhe, wathatha igama lakhe lentombazane (Wijnaldum). Ngezansi isithombe sikamama wakhe.
Igama elithi 'Boateng' laliyigama lomama wakhe osemncane ohlobene nomdlali waseDutch osetshentshwe umhlalaphansi waseGhanaan-umsuka uGeorge Boateng. Ubaba wakhe wesifazane wanginika isibongo sakhe kodwa ngemuva kokuhlukanisa umama, uWijnaldum wavala igama. Wijnaldum wanezela, "Umama nobaba wami wangempela yiSurinamese ngakho abantu kufanele bawuqonde."
ABAKHAYA: UWijnaldum unabafowabo ababili abancane, omunye wabo, uGiliano Wijnaldum, okwamanje odlala iFiladelphia Union.
Unomfowabo omncane, uRajvv van La Parra, okwamanje udlala eHiddersfield Town.
Ekugcineni, umshana wakhe omncane kunazo zonke, uRogerio Wijnaldum, umdlali webhola. URogerio uyathandeka kakhulu ngomfowabo omkhulu, uGeorginho.
OKUSHIWO: UWijnaldum ungumzala womuntu wangaphambili waseMadrid Royston Drenthe. UDrenthe wachitha isikhathi e-Real Madrid, e-Everton ngokubolekisa futhi edlale ukufunda ngesikhathi esiye waba umsebenzi wokuhamba.
I-Georginio Wijnaldum Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
UGeorginho Wijnaldum unezici ezilandelayo zobuntu bakhe.
Amandla kaWijnaldum: Uhlakaniphile, unesibindi, unesithakazelo, umngane weqiniso kubo bonke.
Ubuthakathaka bukaWijnaldum: Ungaba nomona, ukufihla futhi udlame uma uphonsela emkhawulweni.
Yiziphi iWijnaldum ezizithandayo: Uyakuthanda iqiniso, amaqiniso, alungile, abangane bakhe isikhathi eside futhi ehlekisa abalingani bakhe.
Yini iWijnaldum engathandiyo: Ukungathembeki abantu, izimfihlo zembula nabantu abathandekayo.
Ngokufingqa, u-Wijnaldum unesithakazelo futhi unabantu abanamandla. Uzimisele futhi unqume kakhulu. Ungumuntu ozocwaninga aze athole iqiniso. UWijnaldum uyindodana yokuqala nomholi omkhulu.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeGeorginho Wijnaldum yezingane kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.